Teknolojia fanaraha-maso 3D nozaraina tao amin'ny Indostrian'ny Automotive
avy amin'i Createproto Rapid Manufacturing ny 07 Jul 2021
Fampiharana momba ny fampiharana Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny fiara, ny mpamokatra marika isan-karazany dia mifaninana amin'ny fahamboniana, ny fanodinana CNC, ny fanontana 3D, ny laminasiana banga, sns. Dia namorona rojo indostrialy goavambe. Mitombo hatrany ny isan'ireo fiara an-trano eto amin'ny fireneko, ary ...
Inona no tokony ho fantatrao momba ny indostrian'ny fanontana 3D?
avy amin'i Createproto Rapid Manufacturing ny Jul 02, 2021
Ny teknolojia fanontam-pirinty 3D dia antsoina koa hoe teknolojia famokarana additive, izay mifototra amin'ireo rakitra maodely nomerika, amin'ny alàlan'ny vy vita amin'ny vovoka na plastika ary fitaovana azo ampaherezina hafa hanamboarana zavatra amin'ny alàlan'ny fanontana sosona. Ny fanontana 3D dia matetika azo amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia nomerika m ...
Inona ny fiheverana ny ampahany mazava ho an'ny milina CNC?
avy amin'i Createproto Rapid Manufacturing ny 24 Jun 2021
Ny fahamendrehan'ny masinina ao amin'ny ivon-toeran'ny milina CNC no tena atahoran'ny mpanjifa. Ny fahamendrehan'ny milina ivon-toeran'ny milina CNC dia manondro ny haavon'ny vokatra vokariny. Ao amin'ny indostrian'ny famolavolana, ny maha marina ny milina sy ny lesoka amin'ny milina dia samy ilazana ny evaluatin ...
Fanontana 3D amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara mba hitehirizana ny fotoana sy ny vidiny
tamin'ny 22 Jun 2021
Nentin'ny haino aman-jery, ny fanontana 3D dia niseho tamin'ny besinimaro ho toy ny indostria avo lenta, ary ny fitaoman'ny haino aman-jery dia nahatratra ny fara tampony taorinan'ny taona 2023. Raha ny tena izy, ny fanontana 3D dia teknolojia famokarana ihany. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny indostrian'ny mpamokatra fireneko dia namolavola haingana ...
Orinasa serivisy famolavolana machining 10 ambony
tamin'ny 18 Jun 2021
1. Protolabs www.protolabs.com Maherin'ny 30 ny fitaovana fanodinana plastika sy vy vita amin'ny vy azo ampiasaina ho an'ny prototypes sy ny faritra ampiasain'ny mpampiasa faran'izay haingana ao anatin'ny 1 andro. Makà teny nalaina tamin'ny famolavolana maimaim-poana. 2. Xometry www.xometry.com Serivisy fanodinana CNC an-tserasera manolotra teny nalaina avy hatrany tamin'ny avo lenta ...
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 17 Jun 2021
Rehefa manohy ny dianao mandroso sy mitondra vokatra vaovao eny an-tsena ianao dia manana andiana fanapahan-kevitra raisina momba ny prototyping - na handefa fitaovana na vokatra rindrambaiko ianao, na ny fitambaran'izy roa - mila manana prototype ianao ...
Fanontana vita amin'ny metaly 3D - hevi-diso diso 7 mahazatra
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 10 Jun 2021
Ny tsy fahampian'ny fahatakarana ny fahaizan'ny 3D fanontana sy ny fetran'ny fanontana dia mijanona ho iray amin'ireo fanamby lehibe amin'ny fandraisana ny teknolojia bebe kokoa. Ny hevi-diso miseho manodidina ny haitao dia tsy mampiditra afo fotsiny. Ao amin'ny lahatsoratra anio, hofoananay ny sasany amin'ireo ...
Inona no atao hoe Machining Micro Staping?
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 01 Jun 2021
Vohay ny fitaovana elektronika rehetra ary hahita singa madinidinika ao ianao. Ny fanamboarana ireo mpampifandray sy ampinga ireo dia asa sarotra, sarotra lavitra noho ny nohitsakitsahana, niondrika ary namboarina tamin'ny faritra lehibe kokoa. Antony iray, ny fiasa isam-batan'olona amin'ny ...
Ahoana no hampitomboan'ny automatisation teknolojia CNC ny fahombiazan'ny mpiasa
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 12 Mey 2021
Iray amin'ireo olana sendra ny fivarotana teknolojia fahombiazana ny fitomboana. Eny, toa hafahafa fa ny fitomboan'ny orinasanao dia olana saingy na izany aza. Ny tena tompon'andraikitra amin'ireo tompona fivarotana masinina rehefa mitombo ny asany dia ny mpiasa. Mila fotoana bebe kokoa f ...
Ny famolavolana ampahany maty dia manan-danja mitovy amin'ny fitaovana
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 19 Apr 2021
Die casting dia mitana ny laharana ambony amin'ny lisitry ny fizotran'ny fanodinana vy. Toy ny endrika fanariana hafa, ny metaly anidina dia arotsaka ao anaty lasitra roa, saingy ny fanariana maty dia manao izany amin'ny tsindry, manery ny fitaovana ho any amin'ny zoro rehetra sy ny lava-bato ao anatiny. Midika izany fa die cas ...
Createproto dia nanao ny fitaovana haingana tamin'ny fanontana 3D ny teknolojia ara-pitaovana Craphene
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 13 Apr 2021
Ny fotoana voalohany nampiasan'ny Createproto graphene hanamboarana fitaovana haingana ho an'ny mpanjifa mitaky tanjaka farany, aorian'ny fitsapana iray volana, dia namboarina ihany koa ny fitaovan'ny mpanjifa haingana. Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana fanontana 3D eny an-tsena dia plastika, me ...
Famolavolana fiaramanidina (Fizarana 2): Horizons manitatra
avy amin'i CreateProto Rapid Manufacturing ny 25 Okt 2020
Andao hodinihintsika ny fizotran'ny tsingerin'ny famolavolana fiaramanidina maoderina sy ohatra iray hampiasana ny serivisin'ny mpanamboatra prototype ho an'ny fitsapana prototypa. Ireo mpanapa-kevitra momba ny injeniera maoderina dia mihevitra ny fampiasana herin'ny computational tafahoatra amin'izao fotoana izao tsy misy ilana azy sy ho mpihinana fotoana. Doka ...
Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana,